Sacuudiga oo dharbaaxo kala kulmay xubinimada gole hoostaga UN-ka
Tani ayaa la sheegay in ay sawireyso qaabka sumcada Riyadh u burburtay sanadihii dambe.
RIYADH, Saudi Arabia – Sacuudiga ayaa ku fashilmay doonistiisa in uu xubin ka noqdo Golaha Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobay xilli Shiinaha, Ruushka iyo Cuba ay hantiyeen kurastii ay u sharax-naayeen.
Coddeynta oo qabsoontay Talaadadii ayaa waxay ka careysiisay qaar kamid ah difaacayaasha Xuquuqda Bini'aadanimada ee caalamka oo dil.
Wadamada guuleystay ayaa muddo xileedkooda wuxuusi rasmiya u bilaabanayaa 1-da bisha Janaayo ee sanadka nagu soo fool leh ee 2021-ka.
Ruushka iyo Cuba ayaysan jirin cid la tartantay. Balse, Sacuudiga iyo China waxay la baratameen dowladdaha Pakistan, Uzbekistan iyo Nepal.
Pakistan ayaa heshay 169 cod, Uzbekistan 164, Nepal 150, China 139 iyo Sacuudiga oo kaalinta ugu hooseysa galay wuxuu helay 90 cod.
Shan iyo tobban dal cusub ayaa la doortey Talaadadii. Si guud, wuxuu golahaa oo difaaca xuquuqda bini'aadamka uu ka kooban afar iyo todoba.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa ku sifeysay Sacuudiga iyo Shiinaha "labada waddan ee xadgudubka ugu balaaran ka geystay aduunka".
Sidoo kale, hay'addan fadhigeedu yahay New York ayaa farta ku fiiqdey dambiyo dagaal oo Moscow ay ka sameysay gudaha waddanka Suuriya.
Xeeldheereyaasha ayaa su'aal gelinaya qaar kamid ah wadamada guuleystay, iyagoo cuskanaya rikoorkooda xadgudubyadda dhanka shacabka.
Guuldarada soo gaartay xukuumadda Riyadh ayaa la aaminsan yahay in ay daaha ka rogeysa sidda sumcadda Sacuudi Carabiya ee dhanka caalamka ay sanadihii uu dambeeyay hoos u dhac weyn ay u soo wajahadey.
Sacuudiga oo la wareegay hogaanka talis ka howlgala biyaha Soomaaliya
Soomaliya 19.08.2020. 17:05
Taliskan loo yaqaano CTF-150 ayaa sameeya dabagal, kormeer iyo howlgalo caadi, wuxuuna haystaa 14 illaa 15 maraakiib.
Toogasho dad lagu laayey oo ka dhacday gudaha Sacuudi Carabiya
Caalamka 27.05.2020. 17:00
Sacuudiga oo ka hadlay qaraxii rayidka lagu laayey ee Muqdisho
Soomaliya 01.01.2020. 16:17
Ruux lagu helay abaabulka shirqool ka dhan ah xafiisyada QM oo la tarxiilay
Caalamka 20.10.2019. 15:39
Soomaaliya: Shir heer caalami ah oo ka furmayo Muqdisho
War Saxaafaded 04.12.2017. 00:16
UN-ka oo walaac ka muujiyey isku-dayo uu waddo gudoomiye Mursal
Soomaliya 08.08.2020. 19:00